MB 2015 Oktoobar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
WARARKA | ITALIANO | FRANÇAISE | ESPAÑOL | PORTUGUÊS
CODKA MARK> QAARKA
Luqad kale- Jarmalka- Ingiriis- Nederlandays- Deenish- Finnish- Af Iswiidhish- Noorwiijiga- Polish- Bulgarian- Ruush- Catalan- Basque- Irish- Welsh- Icelandic- Giriig- Scottish Gaelic- Turkiga- Slovenian- Yukreeniyaan- Roomaaniya- Armeniyaan- Azerbaijani- Lithuaniyan- Belarusian- Estoniyan- Joorijiyaan- Hangari- Galician- Boosniyaan- Makedoniya- Albaaniyaan- Slovak- Czech- Croatian- Corsican- Kurdiyiinta (Kurmanji)- Latin- Esperanto- Cibraaniga- Faaris- Carabi- Jabaaniyaan- Kuuriyaan- Shiine (Dhaqan ahaan)- Filibiin- Indonesian- Latvia- Fiyatnaamiis- Malta- Thai- Hindi- Afrikaans- Malays- Sawaaxili- Haitian Creole- Bengali- Javanese- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mongolian- Nepali- Punjabi- Soomaali- Taamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
Markii aan kahelay qaacidadan sayniska ah ee farxadda maqaal kujira Psychology Today1 Cod dheer ayaan qoslay:
In kasta oo qaaciddadan caqliga badani ay keentay farxad deg deg ah, haddana ma aysan keenin farxad waarta. Fadlan ha khaldin; Waxaan ku raaxaystaa qosol wanaagsan sida dadka kale oo dhami. Taasi waa sababta aan uga mahadcelinayo hadalka Karl Barth: “Qosol; waa waxa ugu cad ee ku saabsan nimcada Ilaah. In kasta oo farxadda iyo farxadda labadaba ay inaga dhigi karaan qosol, haddana farqi weyn ayaa u dhexeeya labada. Farqiga aan ku soo qaatay sannado badan ka hor markii aabbahay dhintay (halkan waxaa naloogu muujiyey midigta). Dabcan kuma faraxsani geerida aabahay, laakiin waxaa la ii xaqiijiyey oo waan ku dhiirrigeliyay farxadda anigoo og inuu weligiis la joogo ku dhowaanshaha Ilaah weligiis. Fikirka xaqiiqada cajiibka ah ayaa sii waday waxayna i siisay farxad. Waxay kuxirantahay tarjumaadda, Kitaabka Quduuska ah wuxuu isticmaalaa ereyada farxadda iyo farxadda ku dhawaad ​​30 jeer, halka farxadda iyo farxaddu ay soo muuqdeen wax ka badan 300 jeer. Axdiga Hore, ereyga Cibraaniga ah ee sama (oo loo tarjumay farxad, farxad iyo raynrayn) ayaa loo adeegsaday si loogu daboolo khibradaha aadanaha kala duwan, sida galmada, guurka, dhalmada, goosashada, guusha, iyo khamriga. (Heesta Heesaha 1,4; Maahmaahyadii) 05,18; Sabuurradii 113,9; Ishacyaah 9,3 iyo Sabuurradii 104,15). Axdiga Cusub dhexdiisa, ereyga Giriigga ah “chara” waxaa marka hore loo adeegsaday inuu ku muujiyo farxadda ficillada Ilaah ee madax furashada, imaatinka wiilkiisa (Luukos 2,10:24,41) iyo sarakicidda Ciise (Lukos XNUMX:XNUMX). Markii aan ku aqrinay Axdiga Cusub, waxaan fahamsanahay in erayga farxadda uu ka badan yahay dareen ahaan; waa dabeecad Masiixi ah. Farxadu waa qayb ka mid ah miraha ay ka dhashaan shaqooyinka gudaha ee Ruuxa Quduuska ah.
Waxaan si fiican ula soconaa farxadda aan ku aragno ficillada wanaagsan ee tusaalayaasha idaha luntay, qaddarka lumay iyo wiilka lumay (Lukos 15,2: 24-1,24). Soo nooleynta iyo dib-u-heshiisiinta wixii “lumay”, waxaan halkan ku aqoonsaneynnaa tirada ugu weyn ee Eebbe isku sharraxo farxad ahaan. Qorniinku wuxuu sidoo kale ina barayaa in farxadda dhabta ahi aysan saameyn ku yeelan duruufaha dibedda ah sida xanuunka, murugada iyo luminta. Farxadu waxay noqon kartaa natiijada Masiixa awgood (Kolosay 12,2:XNUMX). Xitaa wejigii dhibka badnaa iyo ceebtii iskutallaabta lagu qodbay, Ciise wuxuu la kulmay farxad weyn (Cibraaniyada XNUMX: XNUMX).
Anagoo og xaqiiqada dhabta ah ee daa'imka, inbadan oo kamid ah waxay dareentay farxad dhab ah xitaa markaan uheelnay nabad galyo qof aad jeceshahay. Tani waa run maxaa yeelay waxaa jira xiriir aan kala go 'lahayn oo u dhexeeya jacaylka iyo farxadda. Waxaan ku aqoonsanay tan hadallada Ciise markii uu soo koobay waxbariddiisa xertiisii: “Waxaan idinku leeyahay waxyaalahaas oo dhan, inay farxaddaydu buuxsan tahay, farxaddiinnu ay kaamil noqoto. Oo amarradaydu waa: Waa inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday. ”(Yooxanaa 15,11-12). Sida aan ugu korayno jacaylka Ilaah, ayaa farxaddeenuna sidoo kale. Dhab ahaantii, dhammaan midhaha Ruuxa Quduuska ah ayaa inagu dhex jira marka aynu jacaylka ku sii kordho.
Waraaqdiisii ​​uu u diray golaha Filibiin ee uu Bawlos ku qoray intuu ku sugnaa Rome, wuxuu naga caawinayaa fahamka farqiga u dhexeeya farxadda iyo farxadda. Warqaddan ayuu ku adeegsaday ereyada farxad, farxad iyo farxad 16 jeer. Waxaan soo booqday xabsiyada iyo xarumaha dadka lagu hayo oo caadi ahaan kama heli doontid dadka faraxsan. Laakiin Bawlos oo ku xidhan xabsiga, ayaa dareemay farxad isagoo aan ogayn inuu noolaan doono iyo inuu dhinto. Iimaanka uu u qabo Masiixa darteed, Bawlos wuxuu diyaar u ahaa inuu arko duruufaha uu ku arko indhaha iimaanka iftiinka aad uga duwan kan dadka badankood ay arki lahaayeen. Fiiro u yeelo wuxuu ku qoray Filiboy 1,12: 14-XNUMX:
"Walaalahayga qaaliga ah! Waa inaad ogaataa in xariggayga ka hor maxkamad la hor istaagay faafinta injiilka. Taas lidkeeda! Waxay hadda u cadahay dhamaan ilaaliyayaasheyda halkan iyo sidookale kaqeyb galayaasha kale in aan xirnaa kaliya maxaa yeelay waxaan aaminsanahay Masiixa. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo laygu haysto, Masiixiyiin badan ayaa helay geesinimo iyo kalsooni cusub. Hadda waxay ku wacdiyaan Ereyga Eebbe cabsi la'aan iyo cabsi la'aan.
Erayadaan xoogga badan waxay ka yimaadeen farxadda gudaha ee Bawlos la kulmay inkasta oo xaaladdiisu ay ahayd. Wuxuu gartay inuu yahay Masiixa iyo Masiixa ku jira isaga. Filiboy 4,11: 13-XNUMX, wuxuu qoray:
Uma jeedo tan inaan u soo jiito dareenkaaga baahideyda. Ugudambeyn waxaan bartay sida loola qabsado xaaladaha oo dhan. Haddii aan haysto wax yar ama wax badan, aad ayaan u aqaan labada, oo sidaas ayaan ula qabsan karaa labadaba: waan weynaan karaa oo gaajaysan yahay; Waxaan la ildaran karaa yaraanta iyo badnaanta. Waxaas oo dhan ayaan ku samayn karaa Masiixa, kan i siiya xoog iyo xoog. ”
Waxaan ku soo koobi karnaa farqiga u dhexeeya farxadda iyo farxadda siyaabo badan.
Farxaduna waa ku meel gaadh, badanaaba waa daqiiqad, ama natiijada ka soo baxda muddo-gaaban. Farxadu waa weligeed iyo ruux ahaanba, fure u ah garashada qofka Ilaah yahay iyo wuxuu qabtay, wuxuu qabanayo iyo wuxuu sameyn doono.
Sababtoo ah farxaddu waxay kuxirantahay arrimo badan. Waa kacsi, qoto dheer ama bislaad. Farxadu waxay u dhacdaa markii aan sii korayno xiriirka aan la leenahay Ilaah iyo dadka kale oo dhan.
Farxad waxay ka timaadaa mid ku meelgaar ah, munaasabado dibadeed, indho indhayn iyo ficil. Farxadu way kugu jirtaa oo waxay ka timaadaa shaqada Ruuxa Quduuska ah.
Maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ina abuuray si aynu isula noolaano, wax kale oo nolosheena qancin kara ma jiro oo farxad na wada keenaya. Rumaysadku, Ciise wuxuu inagu dhex jiraa annaguna waan ku nool nahay. Maaddaama aannaan nafteennu hadda uun u sii noolaan karin, ayaan ku rayrayn karnaa dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha, xitaa silica (Yacquub 1,2: 4,4), oo aan iska kaashanno Ciise kan ina sillay. In kasta oo uu silica weyn ee xabsiga ku jiray, Bawlos wuxuu ku qoray Filiboy XNUMX: XNUMX: "Ku farxa inaad ka tirsan tahay Ciise Masiix. Mar labaad waxaan doonayaa inaan idhaahdo: farax!"
Ciise wuxuu noogu yeedhay nolosha is-dhiibidda kuwa kale. Waxaa jira bayaan cad oo nolosha ka dhex muuqda: "Ku alla kii doonaya inuu naftiisa badbaadiyo wax kastoo kharash ah waa lumin doonaa, laakiin ku alla kii naftiisa u bixiya inuu aniga ii shaqeeyo weligiis wuu guuleysan doonaa" (Matayos 16,25:XNUMX). Annagoo ah bini-aadam ahaan, waxaan inta badan ka walwalaynaa ammaanta Ilaah, jacaylka, iyo Quduusnimadiisa saacado ama maalmo. Laakiin waxaan hubaa markaynu Masiixu ku aragno sharaftiisa oo dhan, inaan taaban doonno madaxdeena oo aan dhahno "Sidee ugu bixin lahaa feejignaan badan waxyaalaha kale?"
Annagu weli kuma arag Masiixa sida ugu cad ee aannu jeclaan lahayn. Waxaan ku nool nahay isku-raranta, sida lagu hadlo, waana ay adag tahay in la qiyaaso meelaha aan waligood tagin. Waxaan aad ugu mashquulsan nahay iskudayada inaan ka badbadino isku imaatinka si aan u galno ammaanta Ilaah (eeg sidoo kale maqaalkeena "Farxadda Badbaadinta"). Farxadda weligeed ah ayaa suuragal ka dhigaysa in la fahmo silica noloshaan sida fursadaha lagu helo nimco, lagu garto Ilaah iyo isaga si aad ah loogu kalsoonaan karo. Waxaan baranaa inaan uga mahadnaqno farxadaha weligiis sii dheer ka dib markii aan la halgamay silsiladaha dembiga iyo dhammaan dhibaatooyinka nolosha. Waxaan uga mahadcelin doonnaa jirkeenna sharafta leh xitaa intaa ka dib markaan la kulanay xanuunka jirkeenna jir ahaaneed. Waxaan aaminsanahay inay sidoo kale tahay sababta uu Karl Barth u yidhi: "Farxadu waa qaabka ugu fudud ee mahadnaqa." Waxaan u mahadcelin karnaa in farxadda la hor dhigay Ciise. Waxay u saamaxday Ciise inuu iskutallaabta ku adkeysto. Sidoo kale, farxadda ayaa la hor dhigay.
Salaan farxad iyo mahadnaq,
MADAXWAYNAHA GUUD EE GRACE
1"Sinnaanta Farxada" cilmu-nafsiga maanta, Agoosto 22, 2014
© KHUDBADAHA CARRUURTA Adduunka (SWITZERLAND) • XIDHIIDH • OGEYSIISKA SHARCIYADA • SIYAASADDA ASTURNAANTA • EMAIL